Nhau - Yakazara Nongedzo Yezvese Akanakisa Masora Anokuya Kuti Utenge Muna 2021.
Hazvina mhosva kana iwe uchi vape, kumonera majoini kana kutora bong rips; kana zvasvika pakusvuta fodya, panogara paine chinhu chaunofanirwa kunge uine: chakakodzera kukuya. Heano edu mapiki eakanakisa ekukuya pamusika izvozvi.
Hazvina mhosva kuti iwe uri cannabis newbie kana wakarongeka anofarira kana zvasvika kusora, pane chimwe chinhu chakakosha pachirongwa chinobudirira: zvakanaka pasi miriwo. Zvisinei kana iwe uri munhu anosvuta kana vape-mushandisi, chinhu chimwe chete icho iwe chaunofanirwa kugara uinacho pauri ndicho chako chinokuya. Chikonzero chacho chiri nyore; unoda yakanaka, yakatemwa sora inogona kupisa mushe. Sei? Nekuti yakawanda pamusoro nzvimbo inoreva zvirinani yakakwira.
Vamwe vanhu vanoshandisa chigero, minwe yako inogona zvakare kuita hunyengeri, asi hapana nzira inofananidzwa neyekugaya yakavimbika yekare. Ivo vanouya mune ese maumbirwo uye saizi, unogona kuzviwana mune chero chinhu chaunogona kufungidzira, uye neazvino zvigadzirwa, iwe unowana izvo zvinoyemurika maererano nedesheni uye mashandiro. Kugadzira uye tekinoroji zviri kuramba zvichivandudza maitiro ekukuya, uye kana kukuya kuchichinja, kuputa kunochinja zvakare.
Tarisa uone uku kusarudzwa kweakanyanya kukuya pamusika izvozvi uye uone kuti chii chinoita kuti chigayo chigume kubva kune vamwe vese.
Nei Uchishandisa A Weed Grinder?
Uchishandisa mazino akapinza uye ruoko rudiki rweruoko, kana muchina wekudzvanya bhatani kana uri kushanda neimwe yemhando dzemagetsi dzemagetsi, chinokuya sora chinobvarura miriwo yako kuitira kuti usazorega nzara dzako kana kupira iyo yega chigero chauinacho mumba. Nekuda kweizvozvo, iwe unowana zvakakwana kupfungaira pasi bhudzi pasina ziya.
Paunenge uchishanda usina kukuya, haugone kutora miriwo yako ive yakanaka sezvinobvira kuti upise zvakakwana, kunyanya kana iri iyo inonamira-icky. Pasina kutaura, iwe haugone kuwana kief, iwo mabara trichomes anopenya pese pese pabhu rako uye ane simba ane simba. Kwete nyore, zvirinani.
Iwe unogona kupedza maminetsi uchicheka, kana zvakanyanya, uchinhonga bhudhi rako. Kana, iwe unogona kushandisa chigayo uye kupaza yako stash mumasekondi uye uwane kief, iyo iwe yaunogona kumwaya pamusoro peruva rako kuti riwedzere iro. Taura nezve icing pane keke.
Vanokuya vanoona zvakare kunyange kupisa. Kana iwe ukarongedza ndiro ine chunky bud, saka haugone kuzara izere nendiro pack, uye uri kunyatso kuiparadza nekuti haigone kuchipisa zvakakwana. Zvakare, zvinonetsa kumutsa, uye kazhinji kazhinji, kuchine rimwe girini rakasara, izvo zvausingazive kusvikira waenda kunorasa "madota"
Vakaputa pamwe chete uye vasina njere vanozobatsirazve kubva mukukuya masora. Sora iro rave kuburikidza nekunaka (asi kwete rakanyanya kunaka) kukuya kunogona kuenzaniswa zvakapatsanurwa pamapepa uye kunoita kuti kubhururuka kwacho kufefetere. Uye vanosvuta zvirinani, futi.
Mhando dzeMasora Anokuya
Kune maviri akakosha mhando dzehuswa dzinokuya: emagetsi ekugaya uye emagetsi anokuya. Nema grind grind, imwe nhamburiko shoma inodikanwa. Iwe unofanirwa kumonyanisa uye kutendeuka uchishandisa maoko ako kuti basa riitwe.
Kana iri yemubhadharo weiyo yekugaya yekushandisa, mitengo yacho inosiyana asi yakawanda inoonekwa seinodhura nenharaunda yemasora. Izvo zvese zvinoenderana nerudzi, sezvo paine akawanda marudzi emanyowa ekugaya:
2-Piece Weed Grinder: kamuri rimwe rekukuya nekuchengetedza.
3-Piece Weed Grinder: zvikamu zviviri, imwe yekukuya uye imwe yekuchengetera.
4-Piece Weed Grinder: zvikamu zvitatu, imwe yekukuya, imwe yekuchengetera, uye imwe yekief yakazara nejira.
Kunyangwe ivo vasinga zivikanwe, kune zvakare mashanu-chidimbu chemanyorero ekugaya. Mhando iyi inowanzo kuve nezvikamu zvina: kukuya, kuchengetera, uye maviri e kief. Kuve neakabata maviri kief kunogona kukubatsira kubata riine poda yakawanda yemaruva sezvo iine chinyorwa chekuwedzera kuteedzera zvakawandisa zvidyarwa zvemiti.
Iyo yekugaya kadhi ndeimwe mhando yemanyorerwo ekukuya iyo isina chero makamuri uye yakatetepa uye inotakurika. Vanokuya makadhi havazogaya pamwe chete nevamwe vanokuya manyorerwo, uye havazobata kief, asi zvakachipa uye zvinogadzira nyore kukuya pa-iyo-kuenda.
Kunze kwekugadzirwa nenhamba yakasiyana yezvikamu, vanokuya sora vanogadzirwa nezvinhu zvakasiyana, chimwe nechimwe chine zvayakanakira nezvayakaipira:
Plastiki: yakachipa, isingaremi, inopa OK kugaya, haigare kwenguva refu, uye ingangoita kutyora.
Wood: yakasarudzika, yakasikwa, inogona kuburitsa simbi shavings ichiri kushandiswa uye inotora nhanho yakawanda yekukuya.
Aluminium: iyo yakachipa pane zvese simbi, inogara kwenguva yakareba kupfuura plastiki, inorema kupfuura mapurasitiki, iri nyore kushandisa, uye inopa kukuya kwakanaka.
Titanium: yepamusoro soro, haina uremu hwakawanda senge aluminium, inodhura zvakanyanya, yakavakirwa kuti igare, uye inoshandisa mushandisi.
Pakupedzisira, une magaya emagetsi. Vanokuya emagetsi vanokuitirai basa rese, uye vamwe vanozotoparadzira sora renyu, rinovaita kuti vakwanise kuumburuka. Ivo vanowanzo kuve padivi remutengi uye havazochengetedze kief, asi kana iwe uri mumwe munhu ane arthritis kana uine maoko anorwadza, ma grinders emagetsi anotora kushushikana kubva mukukuya maitiro.
Yakanakisa Weed Grinder Brands
Kana iwe waifunga kuti kusarudzwa kwegirazi uye vaporizers kwaive kwakakura, saka hauna kumbobvira waedza kutenga kune yakanakisa sora yekukuya. Kune zviuru zviripo, uye vari kwese kwese, kubva kumashopu kuenda kuAmazon. Unomhanyirawo munjodzi kana uchitenga chigayo nekuti hauzive kana vachizoshanda kusvikira wazvitenga. Pane zvinhu zvishoma zvakashata kupfuura kutambisa mari pane chishandiso chinoita basa risina kusimba.
Kusarudza iyo chaiyo mhando ndizvo zvese kana iwe uchitsvaga yakanakisa sora grinder. Kana iyo mhando iine yakaipa rep, ipapo iwe unogona kutarisira kuwana lousy, isina basa chigadzirwa. Paunenge uchitsvaga akanakisa masora emagetsi emakwenzi, ita shuwa kuyera iwo ane stellar wongororo uye zvipupuriro.
Post nguva: Aug-17-2021